गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अकस्मात् किन रोकियो ? | Suvadin !
विमानस्थल समयमै सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउन चुनौती
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अकस्मात् किन रोकियो ?
हालसम्म आयोजनाको धावनामार्गको अन्तिम चरणको कालोपत्रे हुँदैछ । अब ५ सय मिटर मात्रै बाँकी रहँदा निर्माण नै रोकिएको छ । तर, धावमानर्ग र जमिन व्यवस्थापनबाहेक अन्य काम भने जसोतसो ठेकेदारले सुचारु राखेको छ ।
काठमाडौं, बैशाख २९ - सरकारी लापरवाहीका कारण निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको काम रोकिएको छ । आयोजनाको मुख्य मानिएको धावनमार्ग निर्माणको काम आइबतारबाट रोकिएको हो ।
ठेकेदार कम्पनी नर्थवेष्ट युनाइटेडले भइसकेको कामको पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै काम रोकेको हो । ठेकेदार कम्पनीका अनुसार आयोजनामा नगद प्रवाहको समस्या भएको छ । लामो समयदेखि भइसकेको कामको भुक्तानीका लागि आयोजनाले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनन मन्त्रालयमा तोकता गरेको थियो ।
भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले फाइल बेलैमा एसियाली विकास बैंकमा फाइल नपठाउँदा ठेकदारले समयमा भुक्तानी नपाएको हो । यही अवस्थामा नदीजन्य गिट्टी बालुवाको आपूर्तिमा पनि आयोजनाले समस्या भोगेको छ ।
दाङ, चितवन र बुटवलबाट आयोजनाका लागि गिट्टी बालुवा ल्याउने गरिएकोमा हाल विभिन्न क्षेत्रमा अवरोध भएको छ । ठेकदार र स्थानीय तहबीच कुरा नमिलेर क्रसरजन्य समाग्रीको आपूर्ति रोकिँदा आयोजनामा अन्योलमा परेको छ ।
आयोजनाका एक अधिकारीका अनुसार यी समस्या समधान नगरिए विमानस्थल समयमै सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउन चुनौती थपिएको छ । हालसम्म आयोजनाको धावनामार्गको अन्तिम चरणको कालोपत्रे हुँदैछ । अब ५ सय मिटर मात्रै बाँकी रहँदा निर्माण नै रोकिएको छ । तर, धावमानर्ग र जमिन व्यवस्थापनबाहेक अन्य काम भने जसोतसो ठेकेदारले सुचारु राखेको छ ।
तर, अझै रकम दिन ढिला गरे ठेकदारले सम्पूर्ण आयोजनाको काम ठप्प पार्ने देखिएको छ । सरकारले सन् २०१९ भित्रै यो विमानस्थल निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।